❝University of Pécs, Hungary ရှိ Degree Programများကို 2022ခုနှစ် September Intake အတွက် CROWN Education တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ❞ – Crown Education
❝University of Pécs, Hungary ရှိ Degree Programများကို 2022ခုနှစ် September Intake အတွက် CROWN Education တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ❞
University of Pécs ဟာ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် (၃) အစိုးရတက္ကသိုလ် ဖြစ်တဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်စာရင်းရဲ့ Top 200 အတွင်း (QS World University Ranking သတ်မှတ်ချက်အရ) မှာ ပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး CROWN Educationရဲ့ အကူအညီဖြင့် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
University of Pécs အတွက် Non-Medical Degree Programတွေကို ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်သလို Occupational Therapy (OTM) ပါရှိပြီး ဆေးနှီးနွယ်ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့
General Medicine M.D. (OTM)6years
Pharmacy Dr. Pharm. (OTM)5years
Dentistry D.M.D. (OTM)5years တို့ကို ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းလခနဲ့ ဘွဲ့ရဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ တက်ရမလဲ၊ အနီးဆုံး ကျောင်းဝင်ခွင့် ဘယ်အချိန်တွေရှိလဲ။
University of Pécs မှာ Non-medical ပရိုဂရမ်တွေဖြစ်တဲ့
1. BSc in Architectural Engineering (3.5 years)
2. BSc+MSc in Architecture (5 years) One-tier Master
3. BSc in Business Administration and Management (3.5 years)
4. BSc in Computer Science (3 years)
5. BSc in Computer Science Engineering (3.5 years)
6. BSc in Civil Engineering (4 years)
7. BSc in Electrical Engineering (3.5 years)
8. BA in Classical Music Performance (3 years)
9. BA in Classical Singing (3 years)
10. BA in Orchestral and Choral Conducting (3 years)
11. Electronic Music and Media Artist BA (3 years)
12. BA in Psychology (3 years)
13. BA in International Relations (3 years)
14. BA in Liberal Arts with Majors: Art History, Classical Studies, Ethics, Film and Visual Studies, Philosophy (3 years)
15. BA in Communication and Media Science (3 years)
16. BA in Archeology (3 years)
17. BSc in Biology (3 years)
18. BSc in Biotechnology (3 years)
19. BSc in Chemistry (3 years)
20. BSc in Earth Sciences (Geology,3years)
21. BSc in Mathematics (3 years)
22. BSc in Nursing (4 years)
23. BSc in Dietetics (4 years)
24. BSc in Physiotherapy (4 years)
အစရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘွဲ့ရရှိဖို့ ပျမ်းမျှ အချိန် ၃နှစ်/ ၄နှစ် ကြာ တက်ရောက်ကြရမှာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်စာ ကျောင်းလခပျမ်းမျှ € 5,000 မှစတင်ကာ ရွေးချယ်တဲ့ဘာသာရပ်အလိုက် €8,000 ကုန်ကျမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် Main intakeဖြစ်တဲ့ September(Fall intake) အတွက် ဘာသာရပ်စုံစုံလင်လင် ရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး February (Spring intake) လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ဘာသာရပ် တချို့ကိုသာ ရွေးချယ် သင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
University of Pécsရှိ ဆေးနှီးနွယ်ဘာသာရပ်လျှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ –
Application Fees – USD 200 (non-refundable)
Entrance Examination Fees – USD 250 (non-refundable) တို့ကို ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး University of Pécsရဲ့ Entrance Exam (Online Written Test + Oral Interview ကို Skype/ZOOM ကတဆင့်) ဖြေဆိုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေအ‌နေနဲ့ Written Testအတွက် Biology (20 questions), Chemistry (20 questions), Medical English (20 questions) အသီးသီး ဖြေဆိုဖို့လိုအပ်ပြီး ၁နာရီနဲ့ မိနစ် (၄ဝ) ဖြေဆိုကြရပါတယ်။
Oral Interviewအတွက် ဆေးနှီးနွယ်မေးခွန်းတွေကို Skype/ZOOM က တဆင့် စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတစ်ဉီးချင်းစီအလိုက် မိနစ် ၂ဝ မှ အများဆုံး မိနစ် ၃ဝ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
Biomedical Admissions Test ဖြစ်တဲ့ BMAT ဖြေဆိုထားပြီး ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ University of Pécsရဲ့ General Medicine, Dentistryအတွက် စစ်ဆေးသော Written Test ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာ ပညာသွားရောက်သင်ယူမယ့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေအတွက် ကျောင်းတက်နေစဉ် တစ်ပါတ် နာရီ (၂ဝ)မှ အများဆုံး (၂၄)နာရီအထိ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ University of Pécs တွင် တက်ရောက်ပြီးစီးထားသူတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ချက်ခြင်းပြန်လာရန်မလိုဘဲ “study-to-work” residence permit (၉)လ လျှောက်ထားပြီး ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် အလုပ်ရှာခွင့် ရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
University of Pécs ကျောင်းဝင်ခွင့် ရရှိရန်လိုအပ်ချက်များ။
– Original transcript of previous studies or academic records (secondary school leaving certificate and official transcript of grades from secondary school in English)
– University of Pecs’ Application fee (non-refundable)
– Europass CV in the language of instruction (Curriculum Vitae)
– Completed application form withapassport size photo
– Proof of language knowledge (e.g. Language exam certificate)
– Medical certificate (signed & stamped by your family)
– Chest X-ray (doctor’s note, not the image, and not older than 1 year)
– Vaccination card (showing that you are immunized against Hepatitis B and C) and – HIV test result (not older than3months)
– Other supporting documents (eg. short courses, internship)
– Proof of Fund (Bank Statement) USD 40,000 နှင့်အထက်ညီမျှသည့် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ၏ ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း တိကျစွာဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
– English Proficiency အတွက် TOEFL (iBT internet-based) 80 and above / IELTS (Overall Band Score) 6.0 and above [Covid 19 ကာလအတွင်း Duolingo English Test, IELTS Indicator ဖြင့် လျှောက်ထားလိုပါက Duolingo 110 and above/ IELTS Indicator 6.5 ဖြင့် အစားထိုးဖြေဆို လျှောက်ထားနိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်]
University of Pécs ရှိ အဆိုပါ Bachelor Degree ပရိုဂရမ်များကို 2022 September Intake အတွက် စတင်ပြင်ဆင်လျှောက်ထားလိုသူများအနေနဲ့ ပရိုဂရမ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ deadline မတိုင်ခင် (June 30 ရက်နေ့) စာရွက်စာတမ်းတိကျပြည့်စုံစွာဖြင့် CROWN Education သို့ https://crown.edu.mm/apply/ မှ တဆင့် ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက 09 8850-85-185, 09 26000-4050သို့ Viberမှ တဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။